Waxaan u diray Nuux $ 1000! | Martech Zone
Axad, Nofeembar, 25, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waan ka xumahay hawsha dambe ee tan! Waxaan u dirnay liistada gelitaanka Ade iyada oo gal kasta oo leh lambar aan kala sooc lahayn oo la xidhiidha (adoo adeegsanaya hawsha RAND ee Excel ka dibna kala sooca sadarka). Waxaan markaa haysannay Hannes xulo lambar nasiib ah 108 galitaan si Hannes aysan u ogaan cidda guuleysan doonta. Ku guuleystaha abaalmarinta $ 1,000 wuxuu ahaa Nuux at wpstar.com!
Si loo daboolo kharashka macaamilka ee Paypal, waxaan dhab ahaan u diray $ 1,040 Nuux! Hambalyo Nuux! Abaalmarinta inteeda kale waxay ku socotaa sidoo kale!
Tags: automatticMicrodata muusigDadka microdataWax soo saarka microdataWax soo saarka microdata oo leh dalabyo badantaageerayaasha twittermuuqaalka youtube
Nov 25, 2007 saacadu markay tahay 5:56 PM
Cabsida Awe. Waxay ahayd orod fiican in kastoo. Waad ku mahadsantahay martigelinta bixinta, Doug!
Nov 25, 2007 saacadu markay tahay 6:00 PM
Hagaag tani waa fajaciso weyn aniga aniga tan iyo markii aan guriga xanuunsanayay maalintii oo dhan! Waxaan dhihi lahaa tani waa dhiirigelin in la akhriyo bartaada badanaa, laakiin waxaan horeyba u aqriyay qoraal kasta. Waad ku mahadsantahay qabashada tartan weyn waxaan rajeynayaa in adiga iyo kafaala-qaadayaashiina aad ku faraxsan tihiin, sidoo kale.
Waxyaabaha noocan oo kale ah ayaa runtii iga caawiya inaan qiil u helo waqtigeyga aqrinta qorista ee xaaskeyga 🙂
Nov 25, 2007 saacadu markay tahay 7:31 PM
Hambalyo Nuux! Waxaan kaliya kuu soo diray xiriiriyeyaasha abaalmarinta dheeriga ah.
Waxay ahayd tartan xiiso leh - Waxaan rajeynayaa tartankaaga soo socda Doug 😉
Nov 30, 2007 at 4: 59 AM
Nasiib badan, nin nasiib badan! Adigu * waa inaad * ku tartanto boggagaaga, Nuux, oo aad siisid xitaa iPod. 😉
Goorma ayaa lagu dhawaaqi doonaa guuleystayaasha kale?
Nov 30, 2007 at 9: 32 AM
Dhammaantood waxay ku guuleysteen abaalmarinta weyn! Tartanka xiga waxaan hubaa inaan helayo abaalmarino koowaad, labaad, saddexaad… Uma maleynayo in tartankan uu soo jiitay dareen badan isagoo heysta kaliya 1 guuleyste. (Laakiin way ka farxisay Nuux!)
Nov 30, 2007 at 9: 42 AM
Oooh ok! Waan fahmay markaa.
Waxaan rajeynayaa in tartankaaga soo socda, aad u fududeyn doonto dadka inay sidoo kale soo galaan. Haysashada 10 kafaala-qaade oo wax laga qoro maahan mid aad u dhiiri gelin leh. Dabcan dhamaanteen waxaan dooneynaa galitaan dheeri ah, laakiin waxyaabaha adiga waxtar kuu lahaan kara sidoo kale, sida inaad suulasho ku siiso SU, kaqeyb galka quudintaada, kucaawintaada Technorati, iwm.
Aragtidayda in kastoo. 🙂
Febraayo 21, 2008 saacadu markay tahay 11: 24 AM
Qoraal wanaagsan. Waxaad sheegaysaa qodobo aad u wanaagsan oo dadka intiisa badani si buuxda u fahmin.
Waan ka xumahay hawsha soo daahay ee tan ku saabsan! Waxaan u dirnay liistada gelitaanka Ade-ga oo leh gal kasta oo leh lambar aan kala sooc lahayn oo la xiriira (adoo adeegsanaya hawsha RAND ee Excel ka dibna kala sooca khaanadda). Waxaan markaa Hannes ka dooranay lambar aan kala sooc lahayn oo ku dhexjiray 108 galitaan si Hannes aysan u ogaan lahayn cidda guuleysan doonta. Ku guuleystaha bixinta $ 1,000 wuxuu ahaa Nuux ee wpstar.com! ”